Trends momba ny famolavolana tranonkala sy ny traikefa amin'ny mpampiasa 2017 Martech Zone
Tena nankafizinay ny fandaharana teo aloha teo amin'ny Martech saingy fantatray fa toa antitra io. Raha niasa izy io dia tsy nahazo mpitsidika vaovao toy ny taloha intsony. Mino aho fa tonga tao amin'ilay tranonkala ny olona, ​​nihevitra fa somary taraiky ao aoriana ny endriny - ary nanao ny fiheverana izy ireo fa mety ho toy izany ihany koa ny atiny. Raha tsorina dia nanana zaza ratsy tarehy. Tianay io zazakely io, niasa mafy tamin'io zazakely io izahay, reharehanay ny zanakay… saingy ratsy tarehy izany.
Mba hampandrosoana ny tranokala, nanao fanadihadiana betsaka tamin'ny famoahana tranonkala izay nisambotra ny fizarana tsena izahay. Hitanay ny fitetezana azy ireo, ny fisian'izy ireo, ny endrik'izy ireo, ny fikirakiran'izy ireo mamaly finday, ny fampiasan'izy ireo ny haino aman-jery hafa, ny dokam-barotra ataon'izy ireo, sns. Izahay koa dia nitady tranokala iray ahafahanay mampiditra be dia be ny endri-javatra sy ny fampiasa izay narianay taloha avy amin'ny plugins ary niasa mba hahazoana antoka fa tena foto-kevi-dehibe izy ireo. Izany dia hanampy ny tranokala haingam-pandeha hanatsara sy hampihena ny fotoana mety hisian'ny fifandonana na tsy fitovizan'ny fampiasana hafa.
Nandaitra izany. Ny tranokalanay tafakatra 30.91% ny fifamoivoizana ho an'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Aza atao ambanin-javatra ny sandan'ny traikefan'ny mpampiasa anao sy ny fiatraikany amin'ny fahazoana sy fihazonana azy.
Raha tonga ny fotoana hanomezana endrika ny tranokalanao… misy fotoana iray an-tapitrisany maro manampy anao hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa (UX) ho an'ireo mpitsidika anao. Ny farany fiafarana atambatra ity sary ity miaraka amin'ny hevitra vitsivitsy izay ahafahanao mitady aingam-panahy momba ny endrika.
Isan-taona dia mitondra fironana vaovao ahafahantsika mahita ny mipoitra amin'ny tranokala. Fa satria maso ivoho izay tsy voatery hitsambikina amin'ny fizotran'ny kalesy, dia nitady ny fironana momba ny famolavolana tranonkala sy ny traikefa ho an'ny mpampiasa ny taona 2017 izahay, izay azo ampiasaina hanatsarana ny fiovam-po amin'ny tranonkala rehetra. Izany dia mpanjifa, mpanjifa na mpitarika maro any am-paosinao, izay fomba tsara haneno mandritra ny taona vaovao.
Famolavolana tranonkala sy fironana UX / UI
Volavola mamaly taona - samy hafa ny fihetsiky ny sokajin-taona samy hafa amin'ny votoatiny, ny firafiny ary ny safidiny kanto.
Skeleton Screens - fametrahana pejy tsikelikely, manomboka amin'ny tsotra ka hatramin'ny sarotra mba hahafahan'ny mpanjifa maminavina izay atiny ho avy manaraka.
Bots fampiroboroboana - Mandraisa anjara amin'ireo mpampiasa ho an'ny fanatsarana ny traikefa ho an'ny mpanjifa sy ny fitarihana taranaka nefa tsy amin'ny alàlan'ny boton'ny chat AI.
Varotra marketing - manolotra fisondrotam-bidy, tolotra voafantina ary fivarotana an-tsokosoko mandritra ny fizahana mba hividianana fidiram-bola fanampiny.
Bokotra miantso-mihetsika hihetsika - Mampiasà sary mihetsika tsotra sy malefaka hiantsoana ny bokotrao amin'ny tsindry fitomboana.
Sary mahery fo Cinemagraph - sary ampahany, horonantsary horonan-tsary, sinemagrafitra no tsy ampiasaina intsony fa miteraka fahalianana be.
Explainer Persuader Videos - Mampiasà olona tena izy toa ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa sy ny demo ny vokatra handresena ireo fanoherana sy hanidiana ny varotra.
Overlay miorina amin'ny sandany - Ampiasao ny tolotra fivoahana fa tsy overlay manahirana rehefa misy olona handao ny tranokalanao.
Fahafatesan'ny pejy fandraisana - Ny pejy fitobiana mavitrika momba ny fitondran-tena sy ny mpihaino dia hahatratra tsara kokoa ny demografika sy ny fitondran-tena.
Fanodinkodinana Trumps Navigation - zava-dehibe kokoa noho ny fitazomana ny atiny eo an-tampon'ny pejy maro dia ny mitantara tantara maharesy amin'ny pejy iray.
Tags: 2016fironana famolavolanauiui famolavolanauser experienceMpampiasa interfaceuxfamolavolana ux